Kungani ukuphupha ukufa komuntu. Kungani ukufa kwengane, ukufa komuntu othandekayo. Iphupho lokuhumusha lokufa.
Kuthiwani uma uphupha ngokufa, ukuthi ungayichaza kanjani leli phupho ngendlela efanele?
Ukufa komuntu, ikakhulukazi othandekayo noma ingane, kuhlale kungathandeki. Ngisho noma ungahlangabezane nakho, kodwa ephusheni. Kodwa ngokuphambene nenkolelo evamile, ukuqonda kwethu ngesikhathi sokulala, isibonelo sokufa, sihluke kakhulu kunokusongela impilo yakho noma othandekayo.
Ukufa ephusheni kuyisiteji sesiguquko, isichazamazwi esingabonakalisa ukukhula komuntu siqu, ukuzalwa okusha, ukuguquka kusukela esikhathini esisodwa kuya kwesinye. Ezimweni eziningi, zonke lezi zinguquko zilungile.
Ukufa komuntu kuyaphupha ngani?
Uma umuntu ongaziwa efa ephusheni, kubhekwa ukuthi lesi yisikhathi esihle sokufinyelela eziphakeme noma imigomo emisha. Emva kwamaphupho anjalo kunconywa ukuba ubuyekeze isimo sengqondo ekuphileni noma indlela yokuphila ngokwayo. Esikhathini esizayo esiseduzane, izenzakalo ezibophezelekile ziyophela, futhi imibono eminingi emihle izothatha isikhundla sayo.
Uma umuntu oseduze efa ephusheni, ngubani owayegula kakhulu, lokhu kuchazwa ngokuthi ukwelapha iphupho njengesifo.
Uma umuntu oseduze efa ephusheni, kodwa hhayi isihlobo esiphelile, lokhu kusho ukuthi ubuhlobo phakathi kwakho buzofika ezingeni elisha. Uzokwazisa kakhulu, kuzoba nezimo ezincane zokuphikisana nezingxabano.
Uma othandekayo efile ephusheni, ezimweni eziningi lihunyushwa ngokuthi ubuhlobo bephupho njengesibuyekezo sobuhlobo. Uma kube khona ukuxabana noma ukungaqondani, esikhathini esizayo esiseduze konke lokhu kuzoya ngemuva futhi iminyango emisha yokwakha ubudlelwane bomuntu siqu iyovuleka ngaphambi kwakho.
Uma ingane ifile ephusheni
Uma lokhu kungumntwana wakho, lokhu kungase kusho ukuqala kwesigaba esisha ekuthuthukisweni kwayo. Izingane zikhula ngokushesha, ngokushesha ziqaphele izwe elizungezile. Ukwesaba akudingekile, noma yikuphi ukugula noma izinkinga akulindeleki. Ngokuvamile amaphupho anjalo aphupha ngabomama ngesikhathi sokushintsha kwengane. Ngakho lokhu kuvamile.
Nokho, uma ingane igula ephusheni, bese ifa, kuhle ukubonisana nodokotela. Lokhu kungasho izinkinga zempilo eseduze.
Uma ngabe ingane ayingajwayele, iphupho elinjalo linesizathu sokukhathazeka futhi kusho ukuthi abangane bakho noma izihlobo zakho zingase zikudumaze. Ngaphezu kwalokho, ungathola uchungechunge lokuhluleka emsebenzini wakho nasekhaya.
Kubalulekile ukuqaphela lapho uhumusha onjalo amaphupho. Ngisho nemininingwane encane, elahlekelwe yikho, idala isithombe esihluke ngokuphelele, okungenzeka singathokozi kakhulu.
Uma uthatha, isibonelo, ukufa kukababa ephusheni lakho, khona-ke lokhu, naphezu kokuthi isihlobo esiseduze, sinezindaba ezimbi, ikakhulukazi kubantu bhizinisi. Ubaba uhlotshaniswa namandla, amandla kanye nekhono lokuzivikela. Uma efa ephusheni, umuntu uvuleka ezinsongweni zangaphandle. Abalingani bebhizinisi bangasebenzisa kahle lokhu.
Unina ubonisa umusa, uthando nokukhathalela. Uma umama efa ephusheni, lowo uphuphayo uyesaba izinkinga ezithandweni ngaphambili, kanye nokuxabana nabantu abaseduze.
Ukufa komzalwane ephusheni kungathinta ubuhlobo obuseduze nabangane bakho abahle noma abantu abaseduze. Kubalulekile ukuqaphela ukukhathazeka kubantu abavela kwendawo yakho.
Njengoba sibona, musa ukuthatha ngokoqobo konke okwenzeka kithi ngesikhathi sokulala. Umphuphi akufanele asabe ukufa, ngoba kuvame ukuletha izindaba ezinhle futhi kuthinta impilo yangempela. Noma kunjalo, kufanelekile ukuhlolisisa imininingwane yephupho, ukwenza isithombe esiphelele salokho okungakulindela esikhathini esizayo.
Iyini leli phupho eliphuphayo?
Ukuchazwa kwamaphupho: inja iphupha ngani
Ubhontshisi ku-utamatisi ebusika
Amasikhaya asekhaya okuhlanganisa isikhumba
Izinyathelo zokuvimbela izimpawu zokuqala zomkhuhlane wengane
Indlela yokusebenzisa izitayela zokwenza izinto ekuphileni: amathiphu ama-makeup abaculi
I-Jelly kusuka ku-sitrobheli
I-sauce ye-Bolognese ekhaya: iresiphi ngesithombe esivela kubapheki base-Italy
Isaladi ehliwe nge isipinashi
Yini ehlobisa ingaphakathi endlini futhi idale isimo sengqondo esihle?
Indlela yokuhlobisa igumbi lokulala lamaphupho akho: imikhandlu emithathu yendawo yonke
Kanjani kahle ukufakelwa izitshalo zasendlini
Pudding nge ithanga nama-apula